Vaovao - firma metaly avo lenta
Firma vy tsara kalitao
Te-hanao firavaka vy avo lenta amin'ny kojakojam-pahazavana ve ianao? Azafady mba avia hanatevin-daharana anay, Fanomezana Pretty Shiny dia hanatanteraka ny fanirianay ary hitondra ny hevitrao amin'ny tena fiainana.
Nanolotra volavola misokatra goavambe ho an'ny rojo pendant, firavaka fehin-tànana, firavaka biby fiompy izahay. Firavaka noelyhahafahanao misafidy, izay hamonjy ny saram-bolo anao, ary miaraka amin'izay koa, ny firafitra manokana dia raisina tsara ihany koa. Misy endrika maromaro amin'ny tadiny misy fitaovana, firafitra ary loko isan-karazany. Azonay antoka fa hahatonga ny andronao io amin'ny firavaka DIY ho an'ny kojakojao, toy ny tsoratadidy, sofina, pendant, fehin-tànana, ody divay, finday marani-tsaina, fiara ary maro hafa.
-Materaly: maty manary firaka zinc na vy, maty varahina na vy, aliminioma
-Color: namboarina misy loko mangarahara nofenoina, isan-karazany ny fanontana
-Famaranana: volamena / volafotsy / nikela / varahina, nikela mainty, Matt na famaranana fahagola
-Mety: misy fittings isan-karazany
-MOQ: 100pcs / famolavolana
-Packing: kitapo poly mahazatra na mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Ankoatry ny famaranana mahazatra dia manana ihany koa isika Kitapom-bolavola vy fanontana UVizay ireo vokatra teknika vaovao. Fampifangaroana mahatalanjona ity izay manana logo metaly 3D napetraka eo ambonin'ilay loko feno. Ataovy manintona kokoa ny endrika amam-bikao ary mahazoa maso.
Miaraka amin'ny tranokalanay famokarana maherin'ny 64000 metatra toradroa sy mpiasa manana traikefa 2500 miampy milina ampy sy mandroso, izahay no mpanamboatra za-draharaha manokana amin'ny firavaka vita am-pasana, Pin, farantsakely, cufflinks, bara fatorana ary zavatra fampiroboroboana hafa mihoatra ny 3 taona.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny ody fiaro? Alefaso azafady ny hevitrao momba ny famolavolana sy ny habeny, ny fampahalalana momba ny habetsahana any amin'ny sales@sjjgifts.com, azonay atao ny mamindra ny logo manokana ho lasa vokatra tena tsara.